अब भो गल्फ मा बस्न खतरा, पानी जहाज मै इरानको हमला सुरु ! - Sutra TV Sutra TV
अब भो गल्फ मा बस्न खतरा, पानी जहाज मै इरानको हमला सुरु !
गल्फको ओमानमा दुईवटा तेल ट्याङ्ककरमा क्षति पुग्ने गरी भएको शंकास्पद आक्रमणमा इरानको हात रहेको अमेरिकाले दाबी गरेको छ । यद्यपि, उक्त आरोपलाई इरानले अस्विकार गरेको छ । निकै व्यस्त तेल निर्यात मार्ग नजिकै रहेका दुईवटा तेल ट्याङ्ककरमाथि बिहीबार हमला भएको थियो ।
ओमानको खाडीमा भएको उक्त आक्रमणमा इरानको हात रहेको गोप्य सूचना पाएको भन्दै अमेरिकी विदेशमन्त्रीले दाबी गरे पनि इरानले त्यसको लगातार खण्डन गरिरहेको छ ।
इरानले आक्रमणको खण्डन गरेपनि अमेरिकाले एउटा भिडियो फूटेज सार्वजनिक गर्दै हमलाको जिम्मेवार इरान भएको जिकिर कायम राखेको छ । उक्त भिडियो फुटेजमा देखिएका व्यक्तिहरु इरानी रिभोलुस्नरी गार्डका सदस्यहरु भएको अमेरिकी सेनाका प्रवक्ताले दाबी गरेका छन् । ‘अमेरिकी सेन्ट्रल कमान्डले भिडियो मात्रै सार्वजनिक गरेको छैन, घटनाको तयारीको योजनासमेत सार्वजनिक गरेको छ’ अमेरिकी सैनिक प्रवक्तालाई उद्धृत गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरुले उल्लेख गरेका छन ।
भिडियोमा कसैले प्रत्यक्षे आक्रमण गरेको नदेखिए पनि शंकास्पद रहेका मान्छेहरुलाई देखाइएको छ । अमेरिकाले उनीहरुले नै आक्रमण गरेको दाबी गरेको छ । गत मे महिनामा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरानमाथि प्रतिबन्धको घोषणा गरेसँगै मध्यपूर्वमा अमेरिका इरानबीचको तनाव दिनदिनै बढ्दो अवस्थामा छ ।
हमलापछि अमेकिराले कुनै पनि प्रकारका आतंकवादी गतिविधिलाई अमेकिराले सहन नसक्ने भन्दै त्यसको जवाफ दिने बताएको छ । तेल ट्याङ्ककरमाथि भएको हमलापछि तेलको अन्तराष्ट्रिय मुल्यमा वृद्धी हुने आशंका गरिएको छ ।